Abavelisi be-Welding ze-Welding-i-China i-Welding iirobhothi abaxhasi kunye ne-Factory
YASKAWA oluzenzekelayo ukuwelda irobhothi AR1440
Zenzekelayo ukuwelda irobhothi AR1440, Ngokuchaneka okuphezulu, ngesantya esiphezulu, umsebenzi ophantsi wokusasaza, iiyure ezingama-24 zokusebenza okuqhubekayo, kufanelekile ukuwelda ngentsimbi yentsimbi, intsimbi engenasici, iphepha elihlanganisiweyo, i-aluminium alloy kunye nezinye izinto, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo zemoto, ifenitshala yesinyithi, izixhobo zomzimba, oomatshini bobunjineli kunye nezinye iiprojekthi zokuwelda.
Inkqubo ye- I-Yaskawa arc welding robot AR2010, Ngengalo engu-2010 mm, inokuthwala ubunzima be-12KG, eyonyusa isantya serobhothi, inkululeko yokuhamba kunye nomgangatho we-welding! Ezona ndlela zokufaka kule robhothi yewelding yile: uhlobo lomgangatho, uhlobo olujonge ezantsi, uhlobo olonyuswe ngodonga, kunye nohlobo oluthambekileyo, olunokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi ukuya kuthi ga ngoku.
Yaskawa ukuwelda irobhothi AR1730
Yaskawa ukuwelda irobhothi AR1730 isetyenziselwa I-arc welding, Ukulungiswa kwe-laser, ukuphatha, njl., ngomthwalo omkhulu we-25Kg kunye noluhlu oluphezulu lwe-1,730mm. Ukusetyenziswa kwayo kubandakanya i-arc welding, i-laser processing, kunye nokuphathwa.
Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,